Codsiga ACCESS Paratransit Advisory Commission (APAC, Gudigga Talo Bixinta Kaabista Socdaalka ee imtaxaanka ACCESS) Survey
Codsiga ACCESS Paratransit Advisory Commission (APAC, Gudigga Talo Bixinta Kaabista Socdaalka ee imtaxaanka ACCESS)
Dulmarka codsiga 2021
Waad ku mahadsan tahay codsigaaga kamid noqoshada Access Paratransit Advisory Committee (APAC). Ujeedada Gudigga Talo bixintu waa inay talo ka siiyaan King County Metro Transit, Waaxda fulinta King County iyo Golaha deegaanka arimaha la xariira gaadiidka Access ee quseeya shuruudaha heshiiska adeegga gaadiidka ee Access.
Access Paratransit Advisory Committee (APAC) wuxuu leeyahay kow iyo toban (11) xubnood oo uu magacaabo maamulku ayna ansixiyaan Golaha deegaanku. Xubnaha ayaa ka kooban rakaabka raaca gaadiidka Access paratransit, xubnaha qoyska dadka raaca Access paratransit, wakiilada ururada adeegyada siiya rakaabka Access paratransit iyo wakiilada ururada taageera rakaabka Access paratransit iyo/ama rakaabka raaci doona ee aan aqoonta badan u lahayn luuqada Ingiriiska.
Xubnuhu waxay shaqayn doonaan muddo hal sano ah ama labo sano ah. APAC ayaa qabta kulan dadwayne bil kasta wuxuuna qabtaa kulan doceedyo marka loo baahdo si loo dhameystiro qorshaha shaqada xalna loogu helo ciladaha kale ee soo baxa. Kulannnada bilaha ah ee APAC ayaa la qabtaa Isniinta labaad ee bil kasta markay saacadu tahay 6:00pm – 7:30pm waxaana hadda oonleen ahaan loogu qabtaa aalada Zoom ilaa amar danbe.
Buuxinta codsigaan ma damaanad qaadayso inaad xubin ka noqoto Access Paratransit Advisory Committee, taas badalkeed codsigaaga ayaa loo diri doonaa Waaxda fulinta ee King County si ay uga baaraan dagaan balanta. Xogta Khibradaada ayaa la diri karaa asagoo qayb ka ah foomka codsiga.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa taageero buuxinta foomkaan, ayna ku jirto dirista xogtaada adoo adeegsanaaya taleefanka ama TTY, iimeel, ama boosto ku diraaya codsiga, fadlan iimeel u dir haveasay@kingcounty.gov ama wac (206) 263-1939.